Culimo & Aqoonyahanno oo si weyn uga soo horjeestay Dastuurka Cusub | KEYDMEDIA ONLINE
Culimo & Aqoonyahanno oo si weyn uga soo horjeestay Dastuurka Cusub
MUQDISHO (Keydmedia) - Kullan ay isugu yimaadeen Maanta Qeybaha kala duwan ee Bushada ku nool Magaalada Muqdishu ayaa waxa ay si kulul uga hadleen Dastuurka Cusub ee lagu wado in uu yeesho Dalka Soomaaliya.
Kullankan oo ka dhacay Hotel ku yaalla Muqdisho ayaa waxaa kasoo qeybgalay Mas’uuliyiin ka tirsan Hay’adda Culimada Sooomaaliyeed, Waxgarad, Siyaasiyiin, Odoyaal iyo Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka KMG ah ayaa waxaa lagu diiday Dastuurka Cusub, iyagoo ku tilmaamay in uu yahay Mid aan dani ugu jirin Shacabka Soomaaliyeed iyo weliba inuu yahay mid kasoo horjeeda Diinta Islaamka.
Guddoomiyaha Hay’adda Culumadda Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ka hadlayey kulankaasi ayaa ka hadlay aragtidooda ku aaday Dastuurka Xukuumadda KMG Soomaaliya ay sheegtay in la dhamays tiray, isagoo sheegay in Dastuurkan Cusub uusan ku imaan Hab laga qeyb geliyey dhammaan Bulshada Soomaaliyeed , wuxuu intaa ku daray in Dastuurka ay Hormuud ka noqdeen Hay’addo iyo Shaqsiyaad uu sheegay inay Ajnabi yihiin maalgalintana ay iyagu leeyihiin.
Waxa dad badan ay iswaydiinayaan waxa Sh. Bashiir uu u diiday Dastuurka Federalka oo waliba lagu sheegay inuu yahay ku-meel gaar wax laga badali doono, halka uu soo ansixiyay Dastuurka Puntland oo ah mid si buuxda loo ansixiyay oo aan wax ka badal dambe uusan u dhimaneyn.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa isi soo tarayey hadal haynta Dastuurka Cusub Soomaaliya oo Xukuumadda KMG Soomaaliya uu madaxda ka yahay Ra’iisul Wasaare ‘Gaas’ay sheegtay inay dhamays tirtay, waxaana Hay’adda Culumada Soomaaliyeed ay sheegtay in Qodobo ku jira Dastuurka aysan waafaqsanayn Diinta Islaamka iyo Dhaqanka wanaagsan ee Soomaalidu leedahay.